တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဆိုတာ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Think Tank » တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဆိုတာ	27
has written 125 post in this blog.
King of Secrets (Bo Min) says: ဗဟုသုတရပါတယ်
King of Secrets (Bo Min) says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 147
King of Secrets (Bo Min) says: ဆောရီးဗျာ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လက်သရမ်းသွားတာ
မောင်ပေ says: ဆြာထက်ရေ
ဘီလူးလေး says: နားမလည်ဘူး
အလင်းဆက် says: ဗဟုသုတ ရဖွယ်ရာ… ပိုစ့်ပင် ဖြစ်ပေတော့သတည်း..။
ဇောက် ထိုး says: ဖတ်ရှုပြီး ရသမျှ ဗဟုသုတတော့ ယူသွားပါတယ်။
nature says: ဗဟုသုတရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာထက်ရေ။ တရားရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာလေးတွေမေးချင်လို့ ပိုစ်တခု တင်မလားလို့။ ပိုစ့်တင်တော့ပြန်ရှာဖတ်ရတာလွယ်တယ်။ ကွန်မန့်ရေးပြီးရင်ပြန်ရှာဖတ်ရတာတော်တော်ခက်လို့ပါ။
htet way says: ရေးပါဆရာ
htet way says: ခုလို ဖတ်ရှု့ အားပေးကြတာကိုပဲ ကျေးဇူးပါဗျာ
ဖိုးထောင် says: ကြိုက်တယ်ဗျာ ……. တရားသူကြီးများ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာဖြင့် စီရင်ချက်များချနိုင်ကြပါစေ….
ကြောင်ကြီး says: တရားရုံးရှေ့တွင် တံတွေးထွေးခြင်း၊ ရုံးထဲတွင် အီးပေါက်ခြင်း၊ တရားသူဂျီး အမှုလိုက်စာရေးအား ငွေထိုးပြီးနောက် ကွယ်ရာသွားပုပ်လေလွင့် ပြောခြင်းများသည် ရုံးဒေါ်အား ပို၍မထီမဲ့မြင် ပြုရာရောက်ပေသည်။ :eek:
jess lin says: မသိလို့မေးချင်ပါတယ်ရှင့်။(တရားရုံးတွင်စီရင်နေဆဲအမှုကို ရေးခွင့်မရှိပါဟု ပြောဆိုသတိပေးခဲ့ရဖူးသည်။) ဆရာထက်ဝေးက ဥပဒေအရာရှိလား၊ ဒါမှမဟုတ်သတင်းသမားတွေရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလားသိပါရစေ။(သတင်းထောက်တစ်ဦးသည် တရားရုံး၌ ဥပဒေပုဒ်မ-၃၅၃ အရစွဲဆိုထားသော အမှုတစ်ခုကို စစ်ဆေး နေစဉ်အတွင်း ရေးသားရန် အင်တာဗျူး လုပ်၍ ဂျာနယ် တစ်စောင်၌ထည့်ရန်ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါသည်) အဲဒါဘူလေးလဲ…… ဘူလေးလဲ။ ကျမတို့တောရွာမှာအ
htet way says: ကျွန်တော်က ဥပဒေ အရာရှိ မဟုတ်ပါဘူး
သန်းထွဋ်ဦး says: တရားရေး ဝန်ထမ်းများကို ပြန်လည်၍ ဥပဒေရေးရာ ပြန်
htet way says: ဆရာသန်းထွဋ်ဦးခင်ဗျား
kai says: ယူအက်စ်..ကိုလိုရာဒိုမှာ. လူတယောက်က..ရုပ်ရှင်ရုံထဲဝင်.. လူ၁၂ယောက်သေပြီး.. ၅၀လောက်ဒဏ်ရာရအောင်.. သေနတ်နဲ့ပစ်သွားတယ်..
မြန်မာပြည်.. အနောက်ဖက်ကမ်းခြေအေ၇းအခင်းမှာ.. တချို့မီဒီယာတွေ ပုံနှိပ်စာတွေမှာ.. သုံးစွဲခဲ့တဲ့.. အရေးအသားများကို.. ပြန်စိစစ်ကြည့်ကြစေလိုကြောင်း.. =
etone says: မနက်က အဲ့သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ် …. ။ ဒီလူငယ် စိတ္တဇ လူသတ်သမားပဲ ….. ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 174
Wai Phyoe says: အာ…ဒီလိုဆိုတော့လည်းတစ်မျိုးကြီးပါလား။ဒါဆိုတ၇ား၇ုံးမှာမှမျက်စိပါတာပေါ့ မှူခင်းဖြစ်တဲ့ဘေးနားကလူတွေကမျက်စိမပါဘူးပေါ့။ မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ကမ်းခြေအေ၇းခင်းမှာ ဒီလောက် လူတွေသတ်ဖြတ်၊မြို့လုံးကျွတ်မီး၇ှိူ့တာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးကိုယ်တွေမြင်တွေ့နာတာကို “တ၇ားခံ”လို့ခေါ်လို့မ၇ဘူးပေါ့နော်…………..”Suspect” သံသယ၇ှိတယ်လို့ပဲဖော်ပြ၇တာပေါ့နော်
အဂျစ် says: AN;သဂျီးက မန်းလိုက်ရင် ထိတာပဲ ၊ နားမလည်လို့ ဖတ်ပဲဖတ်နေတာ မန်းဖို့ကတော့အဝေးကြီး (တကယ်) (U)htet way in MDG လို့ရေးရင်ရှယ်ဖို့လုံလောက်လား ဦးလေး..
etone says: ဆရာထက်ရေ တရားရုံးကိုလေ … မထီမဲ့မြင်ပြုတာ …. တရားဥပဒေတွေ ၊ ပုဒ်မတွေကို နားလည် ယဉ်ပါးနေသူ အများစုပါပဲ ။ တရားရုံးနဲ့ ပတ်သတ်မှုမရှိ ၊ knowledge မရှိတဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ ၊ ထိပါးစော်ကားတဲ့ အရေးသားမျိုး ရေးချင်လျှင်တောင် ဘယ်ကစရေးရမှန်း မသိလို့ပါပဲ … ။ (ဥပမာပြောတာနော် …. တရားရုံးကို ထိပါးစော်ကားတဲ့ အရေးသားရေးဖို့ ကြံစည်နေတာ မဟုတ်ရပါဘူး .. ဂယ်ဘာ .. ဂယ်ဘာ :P ) ဆရာထက်ရေ .. နောက်တစ်ခုကလေ … စာရေးသူတွေ ဂျာနယ်လစ်တွေ ဘက်ကလည်း တရားရုံး၏ ဂုဏ်ကျက်သရေကို ထိခိုက်စေသော ၊ တရားရုံးအပေါ်တွင် အထင် အမြင်မှားယွင်းသေး သိမ်စေနိုင်သော အရေးအသားမျိုးကို ရှောင်ကြဉ် ပြီး ရေးသင့်သလို … တရားရုံးကလည်း … အရိုသေပျက်စေမယ့် ခြစား လာဘ်စားမှုမျိုးမပါတဲ့ စီရင်ချက်မျိုးချပေးပြီး … အကြည်ညိုခံသင့်တာမျိုးပါ ။ အကြောင်းကြောင့်အကျိုး … အကျိုးကြောင့် အကြောင်း … ဆက်စပ်နေတာကို ဆိုလိုခြင်းပါ … ။ :D
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: အလို!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ရည်ညွှန်းတာကတော့ မှု့ခင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ ဘောင်အတွင်းကနေ
( ဒါဂ ကိုယ့်ဖာသာ တာဝန်ရှိသလိုလို ဘာလိုလို ရာဒူးတပ်တာ :D )
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: အပေါ်ဂ အကြောင်းကို ကျုပ်က အပေါ်က အဖွားကြီးထက်အရင်ပြောတာ
ခရက်ဒစ်မပေးနိုင်ဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7074
etone says: ရ၀ူး … ရ၀ူး … … အဘပုနော် ……. လူဂျီး ဖြစ်ပြီး …. လူလည်မကျနဲ့ …
ခရက်ဒစ်လည်းပေး ၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်လည်းပေး…….. ခရက်၇ှာလေးလည်းပေး …ဂလုဂလု Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 979
htet way says: အနှီး အကောင်ကြီးကြီးအမြီးရှည်ရှည်နဲ့ တရားသူကြီးဆိုတဲ့ သတ္တဝါက
ခြေမှုံးလို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့ သဘောလေးလည်း ရေးသားပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗ ဒီခောတ်ကတော့ သိပ်ကိုရေးလို့ ရတာပေါ့ဆရာ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုခင်ဗျား
Comments By Postသစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - naywoon ni - လင်းဇော် ထက်ကိုပေါက်(မန်းလေး)၊ ဆြာအုပ်၊ Mလုလင်3in 1 - (ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲ) - padonmar - KZပေါင်းစု - အလင်း ဆက် - မောင် ပေသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်ဖိုင်နယ်မှာ အပိုင်တွယ်မှာက - သခင် mobileစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - မောင် ပေ - ကိုရင်စည်သူဒေဝေါ ဆိုသည်မှာ - KZ - KZ“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - nicolus agral - uncle gyiဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - Foreign Resident - ကြက်အူလှည့်အိုဘယ့် ...ခရီးသည် - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - Mr. MarGa - ko pauk mandalayသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - အတွေးလေးခရီးသည်လေးသို့ - အလင်း ဆက် - လင်းဇော် ထက်မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - အလင်း ဆက် - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - မဟာရာဇာ အံစာတုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - San Hla Gyi - Mr. MarGaစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - may july - ဆူးလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - လင်းဇော် ထက် - မဟာရာဇာ အံစာတုံးFloral Gift - Macro Series - ကိုရင်စည်သူ - Mr. MarGaWhat are some of the unique features of e-commerce technology? - ကိုရင်စည်သူလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - နွေဦးကောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ .......ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။ - Mr. MarGa - padonmarနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၆) - မောင် ပေ - Mr. MarGaမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - Mr. MarGa - may julyအတု - Nyo Win - ကြက်အူလှည့်ဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - kyeemite - padonmarEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities